Dooodaha Ka Socda TVGA UNIVERSAL Iyo HORN Cable Ee Ku Saabsan Arimaha Somalia Waa Kuwa Xaqiiqda Ka Fog. | Cadceed newssite
Dooodaha Ka Socda TVGA UNIVERSAL Iyo HORN Cable Ee Ku Saabsan Arimaha Somalia Waa Kuwa Xaqiiqda Ka Fog.
Waxa socda beryahan doodo ku saabsan siyasadda cusub ee dalkii Somalia la isku odhan jiray.
Waxa doodahan dardar galiyey dhawan markii madaxweyne Xasan sheekh Mxamuud uu booqasho ku tagay dalka Maraykanka USA halkaso u kula kulmay madaxdii ugu saraysay dawladda Maraykanka sida Barack Obama (USAPresident) iyo Hillary Clinton(Secratery of State USA ).Wadahadaladii dhex maray madaxdaas ka dib wax Somalia ka heshay USA Aqoonsi calami (Somali State Recognition) markii ugu horaysay muddo 20 sano iyo dheraad ah marki ay burburtay dawladii Somaliyeed ee la aqoonsanaa 1991.
Waxa dad badan oo Somaliyeed arintan ay u arkeen talabo hore loo qaaday oo soo Afjaraysa dawlad la,aantii ku habsatay Somalia 20 ki sanadood ee u dambaysay.
Waxa qaar kalena ay u arkayeen in aqoonsi la siiya xukumadda Muqdisho aanay Somalia ka dhalin karayn dawlad loo midaysanyahay woqooyi ilaa koonfur.
Waxa haddaba labada TV ee Calamiga ee Somaliyeed oo kala ah Universal TV iyo Horn Cable TV ay dood dhex dhigeen dadki kala aminsana labada fikir todobaadki dhoweyd.
Dhinaca Gobolada woqooyi ama S/Land waxa dooddda ka qayb galay rag aqoon yahan oo dhamaantood laga soo xulay Beesha dhexe ee S/Land ee Talada S/Land gacanta ku haya 95%..
Sidoo kalena waxa dhinaca Koonfurta Somalia doodda ka qayb galay rag laga xulay gobolada Puntland iyo gobolada dhexe ila Muqdisho.
Waxa kale oo Su,alaha la weydiinayey dad iyaga qudhadooda laga soo xulay gobolada aan kor ku soo sheegay oo kal taageerayey afkaartoda.Mar ka laga reebo hal nin oo Prof: oo ka soo jeeday gobolada Bay iyo Bakool.
Waxa doodda labda dhinac ay ku dhamatay is bar bar dhac ,,waxan koox weliba ay ku dooday in Dastuur iyo xeer ay sameeyeen aanay dhafi karin.
Hadan soo qaado qolyaha u doodayey S/Land waxa ay ku dooden in xeer,, dastuur iyo afti intaba ay ka sameeyen gobolada S/Land.Tasoo go,aan lagu gaadhay in dawlad gooni la samaysto laga soo bilabo 1991 ,,1993 ilaa iyo imika.Sida awgeed anay go,aankasi ka noqonayn oo MUQADAS yahay GOONI USU TAAGU.
Waxa ay ka dhawajiyeen in aanay waxba ka qabin wadahadal dhex mara laba dal oo Somaliyeed oo isu tagay 1960
Woqooyi(S/Land ) & Koonfur (Somalia) hase ahaatee waxay jeclyihiin in wadahalku ku ekado IS AQOONSI iyo wax wada Qabsi.Waxa doodahooga ay hoosta ka xariiqeen in nabarada iyo boogta bugta aan lagu daweyn karayn midnimo ee dawadeedu tahay kala tag(Goosasho,,Secession) iyo in laba dawladood la kala noqdo.
Dhinaca kale Somalia waxa ay ku dooden qolyihii Somalia in Dastuur ,,Barlaman iyo dawlad Rasmi oo lo dhan yahy ka dhalatay gayiga Somaliyed 2012 ,,20 Sano ka dib oo lagu jiray dawlad la,aan(Failed State ).
Dawladii dhalatay wax ku jirey gobolada woqooyi (S/Land) barlaman iyo xukumadba.
Waxay doodahooga hoosta ka xariiqeen in wixii tabashooyin ah laga wad hadlo ,,lakiin midnimadu ay MUQADAS tahay madaama dawladda dhalatay lo dhanyahay koonfur ilaa woqooyi ,,Tasoo nasiib wanaag aduunkuna ICTIRAFAY.
Ok wa dood wanagsan wa barbar dhac laakiin doodda yaa ka maqan ma la is weydiiyey?
Dooddda waxa ka maqan dhinaca woqooyiga (S/land) gobolada Bari iyo Galbeed oo ah 50% of S/Land.Doodahaas
ama ha tageeran ama ha diidane miyanay ahayn in Labada TV ee Universal iyo Horn cable ay dadka dhexdhexaad u noqdan oo bulshada Reer Woqooyi(S/land) ay dhamantood ka qayb galan.Dabcan taasi ma dhicin ,,arinkaasina wax uu kuu xaqiijinaya in labada TV ay u adeegayan dano dad gaaar ah. Sida dooduhu aan kor ku soo xusay oo kale aya doodo uga taaganyihiin dadka Reer woqooyiga(S/Land) laftigooga.
Awoodda dawladnimo iyo mamulka waxay ku koobantahay Beesha dhexe ,,Dastuurka iyo aftida waxa qortay beesha dhexe sida iyaga u dan ah.Cabsida beesha dhexe ka qabto Somalia midnimadeeda mid ka weyn ayaa ka jirta gobolada Bari iyo galbeed ee S/Land.Waxana taas ku cadenaya mamulki gobolada S/land wax uu ku jiraa gacanta beesha dhexe dhamaantiis.Madaxweyne,, madaxda Golayasha barlamanka iyo Guurtida ,Golaha wasaaradda 90%.
Taliyaashas Cidamada Milatari iyo Police.Madaxa Bangiyada ,,Maxkamadda sare iyo dhaman madaxda haydaha iyo comissionada sida ka doorashada diiwan gelinta ,xaquul insaanka ,warbahinta iyo haydaha Sirdoonka.Dhamaan talada wadanka Somaliland waxay gacanta ugu jirta hal beel beesha dhexe.
Haddaba wadahalka beesha dhexe ay caalamka iyo Somali inteeda kale ku beerlaxawsanayso ee ay leedahay nabarada ha la dhayo iyo bukaanta iyaguna nabarada iyo dhamacda ay dadayan ha ka wantoobanoo horta wada hadal ha la bilaban walaahooda woqooyi S/land min Saylac ila Taleex.
Hadii S/Land ay ku adkaystan cidna lo joojinmaayo oo dalka waan qabsanay Distoor iyo Aftina dantayadana fulinaya waa qadnay.Maantana mamulka wan haysana nabarada iyo dhamacda hoosta ka shidana waa dadaynaa iyagay u taal.
Iyagana waxa meesha uyaal Somalia oo ku leh Dastuur lo dhanyahay aya dhaqangalay iyo dawlad Somaliyed o la aqoonsanyahay ICTIRAAFNA waa helnay .
Gunaanad:Waxan u sheegaya Labada TV ee hawshan wada iyo inta doodahan ay fureenba in Somali badankeedu idinka maqantahay woqooyi ila koonfur .hadaad xal raadinaysan hawsha balaadhiya oo soomali oo dhan doodda u fura.hadad dad gaara ah u adeegaysan sida idinka muuqata meel fog gaadhimaysan ceeb iyo taariikh xumo aya la idinku xasuusan doona dhaman gayiga Soomaaliyed Mutaqbalk.